Wasiirka Amniga Qaran oo aan meesha ka saarin in ay amni daro wali ka jirto magaalada Muqdisho xili uu shalay tagay Barlamaanka.
Sagal Radio Services • News Report • April 28, 2014
Wasiirka Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed oo shalay ka hor hadlayay Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ilaa sideed wado oo ku yaal magaalada Muqdisho ay u xiran yihiin sababo amni awgood, iyadoo wadooyinka xiran ay intaas ka badan yihiin.
C/kariim Xuseen Guuleed Wasiirka Amniga oo sheegay in is bedelada maamulada degmooyinka aanay waxba u dhimi doonin ammaanka
Wasiirka Amniga Qaranka C/karii Xuseen Guuleed oo ka hadlayay is bedelada lagu sameynayay Gudoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa sheegay in aanay waxba u dhimi doono ammaanka caasimada Muqdisho.
Wasiirka Amniga Qaran oo iska Fogeeyay edeen dhawaan loo soo jeediyay
Sagal Radio Services • News Report • March 8, 2014
Wasiirka Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed ayaa ka hadlay war ka soo yeeray Gudoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsan oo ahaa gaadiid ambalaas ah nuuca aan xabadaha karin in aan la ogeyn meel ay jiraan, kadib markii ay la wareegtay Wasaaradii Arrimaha Gudaha Xukuumadii Saacid.
C/kariin Guuleed "Ku tala galka weerarkaas wuxuu ahaa inay Hotelka galaan, oo ay dad badan laayaan"
Sii hayaha Xilka Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed booqday Hotelka Jazeera oo qaraxyo xalay ka dhaceen ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ka hortageen isku dayga weerarkaas oo ahaa in gudaha loo galo Hotelka.